Muraayadda gubta saliidda - Madaxa beebka gubashada saliidda qaloocan - 14 mm isku xidhka lab | Dukaanka Madaxa ee Dragons
Bogga ugu weyn → Products → Muraayadda gubta saliidda - Madaxa beebka gubashada saliidda ee qaloocan - 14 mm isku xidhka lab
Cinwaanka Hore - .5.75 XNUMX GBP
Muraayad qaro weyn 14 mm isku xidhka lab.
Baakada weyn ee ku taal madaxa gubashada saliidda galaaskan qaloocan waxay wax weyn ka beddeli kartaa xaddiga qiiqa ay soo saaraan wax -soo -saarkaaga ama saliidaha lagama -maarmaanka ah. Muraayadda ka sii dhumuc weyn waxay sii haynaysaa kulaylka muddo dheer oo baaquli weyn wuxuu bixiyaa hawo badan taas oo marka la isku daro soo saari karta qiiq ama uumi aad u fiican. Ka taxaddar inaadan kulaylka ku shubin baaquli maaddaama kulaylka la hayaa uu burburin karo waxa ku jira adiga oo ku gubi kara qafis
Gubashada saliidda galaaska ah ee cad ayaa gacanta laga sameeyay dhalo qaro weyn leh. Waxay leedahay naqshad qaloocan, oo ku habboon in lagu isticmaalo saliidaha iyo waxsoosaarka. Gubashada saliidda waxay ku timid qalab 14mm oo lab ah oo loogu talagalay riigga saliidda ee aad jeceshahay ama dabka!
Qiyaasaha qiyaasta ee madaxyadan gubta waa:
Dhererka guud 70 - 75 mm
Dhexroor baaquli galaas 25 - 30 mm
Miisaanka 14 g
Xiriirka lab 14 mm
Qalab: galaaska badbaadada borosilicate oo tayo sare leh
Waxay sidoo kale la heli karaa 10 mm lab iyo 18 mm lab xiriir
Eray-bixinnada kale ee badeecadan waxaa ka mid noqon kara: S-foorarada, qoorgooyaha, tuubooyinka jillaab
Madaxa weyn ayaa si fiican u shaqeeya
Waxaan rabay inaan isku dayo madax ka weyn kii la yimid bong oo runtii aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxaan helay jawaab celin aad u degdeg badan su'aal lagu dhajiyay mareegaha, si loo hubiyo inaan dalbaday madaxa cabbirka saxda ah. Mahadsanid!
Waad ku mahadsan tahay, Simon; aad baad u mahadsantahay.
Fikradaha alaabta: La yaabka leh oo cajiibka ah ee la xiriira iibsigaygii ugu dambeeyay
Horumar: Nowt. Wakhtigan
Way ka fiican tahay bixinta Amazons
Muraayad tayo fiican leh. La hubo
Ali (Magaalada Kuwait, KW)
Fikradaha alaabta: Medwakh
Horumar: Waxba, waad gubaysaa
Kaamil ah, aad baad u mahadsan tahay
Wax walba waa kaamil, waad ku mahadsan tahay warqaddaada macaan ❤️
Haddii aad ogaan lahayd inta warqaddaasi dhab ahaan iiga dhigan tahay. Si kastaba ha ahaatee, alaabtu waxay ahaayeen tayo sare
Hi Cali, mahadsanid aad baad u soo dhaweynaysaa.
Waad mahadsan tahay, Robert.
Kaamil ah. Dhoofinta degdegga ah iyo raadraaca.
Cabbirka saxda ah ee gubiyaha.
Waad ku mahadsan tahay, Stephane.